Marka dumarow (kulli ma wada aha) fahma raggiinu
» Marka dumarow (kulli ma wada aha) fahma raggiinu
Asc anigu waxaan ahay nin indhahana waan isku qabtaa marka biyuhu iga soo baxayaan, kamase fikirko naag kale waxaase iigu wacan dareenka ka dhasha soo bixidda shahwada. Badanaana raggu waxay indhaha isku qabtaan marka biyuhu ka soo baxayaan. Wayse dhici kartaa in ragga qaarkii indhaha isku qabtaan xilliga hore ee la wada raaxeysanayo ayna ku kallifto inuusan ku qanacsaneyn wada shaqeyn la'aanta ka iman karta xaaskiisa oo uu markaas qalbiga gashado naag kale oo horay u soo martey oo middan hadda uu la raaxeysanayo kaga fiicned galmada. Waxaanan u sheegayaa dumarka Soomaaliyeed in raggu dareemaan raaxo iyo qanacsanaan dheeraad ah markay arkaan xaaskooda oo tuseysa iney ku raaxeysaneyso galmadiisa. Ma ahan wax ceeb ah inuu ninkaagu maqlo codkaaga ama guuxaaga iyo ereyo aad ugu muujineyso sidaad uga heleyso uguna qanacsan tahay galmadiisa. Wuubase kugu sii jeclaanayaa una xiisayaa mar kasta galmadaada. Marka dumarow xishoodku waa wax fiican Ilaahay ayaana idinku abuuray, laakiin ma aha inaad ka xishootaan ninkaaga oo aad neefta isku xirtaan si uusan kuu maqlin ama kuu dareemin inaad ka heshay galmadiisa. Sideed uga xishooneysaa nin aad isu qaawisey oo aad galmo la sameyneyso? Maxaa kuu qarsoon oo kuu haray oo aad kala xishoon haddiiba aad hoos jiifto? Tan kale ee aan idinkula talinayo waxay tahay inaadan mar kasta ninka ka sugin inuu ku soo doonto. Waxaa dhici karta inuusan galma rabin laakiin aad adigu rabto oo aad is tiraahdo muxuu kuu soo raadsan la'yahay malaha kuma jecla ama naag kaluu la soo raaxeystey isagana ama uu daallan yahay ama dhib kale haysto. Haddiise markaaad u baahan tahay galmo aad ku billowdo oo aad kiciso waxaa hubaal ah inuusan ku dhaafaynin. Hadduu problem haysteyna uu ku iloobayo galmada uuna nafisayo.
Waxyaalaha ugu badan ee ragga ku kallifa iney naag kale raadsadaan waxaa ka mid ah qanacsanaan la'aan dhanka gogosha ah. Cuntada waad noogu roon tihiin oo waad ka dadaashaan, arrintuse ma aha cunto keliya ee noogu roonaada gogoshana. Bal raggina weydiiya midkay dooran lahaayeen gabar cunto karis fiican iyo gabar gamada ku wanaagsan. Anigu kolley tan danbaan dooran lahaa. Marka dumarow (kulli ma wada aha) fahma raggiinu waxay rabaan iyo sidey u rabaan idinkuna ha qarsannina darenkiinna iyo waxaad rabtaan iyo sidaad u rabtaan si qoysas badani uga badbaadaan burbur.
Ha u qaadannina inaan keligiin dumarow eeda idin saarayo ee ragguna qayb ayay ku leeyihiin arrimahan, laakiin markalaan iyagana ka hadli doonaa insha Allaah.
Waxaa qoray mid ka mid ah akhristayaasha webka raaxada guurka Talo haddii aad u baahan tahay booqo maamulka talooyin
Wacan11/14/2011Waaad ku mahadsnatahay taladaada wllo,ruuntii. Wayna fiicnatahay in waxa la kala faa,iidaystaa.ReplyDeleteAnonymous11/15/2011waan kugu raacsanahay anigu taladaada waxana ahay talodonaha web kanrunti horay umanan waya aragsanayn lakiin waxan wax bartay markaan gursaday inan ila da,aad ah oo wax badan ibaray ana an qatay casharkisakamaba sugo ninkaygu inu isaga un wax iga doono ee ana wanka doonaa waayo isaga kaliya malaha dareen aniguba wan leyahay wayna dhacda isagoon galmo ujedin inan anigu ubahdo kolkasan de ku bilaba tataabasho iya dhunkasho waliba anoo bahalkisa gacanta ku qabsadakadibna dee wu ku qasban yahay inu kaco on raxaysano marka.raguna arinta kamawada sine ragaw kaca oo xasaskina bara inaanu xishod jirin kalsonidina siya habluhu way idinfahmayahe.mahadsanidinReplyDeleteAdd commentLoad more...